Useto lwekhamera kwiFoto yeLanga
Qala ukudubula elangeni xa likroba ngaphezulu kolundi. Xa ufota ubume bendawo ekuphumeni kwelanga, umgangatho wokukhanya kunye nemibala itshintsha phantse ngowesibini. Yenza iifreyimu ezininzi kwaye uzidubule kwiindawo ezahlukeneyo.
Sebenzisa imigaqo yokwakheka kwaye ujonge ngononophelo apho ubeka khona umgca wokukhanya. Musa ukuthabatheka ngobuhle bokuphuma kwelanga ude ulibale ukuba injongo yakho kukubamba iifoto ezinyanzelisayo zokuphuma kwelanga-iifoto abantu abaza kuchitha ixesha elithile bezibona.
Ukuba ufota ukuphuma kwelanga kwaye udubula ngqo elangeni, ikhamera yakho iya kuzama ukuphuma ngaphandle kwemizamo yakho emihle. Lumka kwaye uhlale inyathelo elinye phambi kwekhamera yakho. Ukufumana ifoto enkulu yokuphuma kwelanga kufuna ubude obuchanekileyo, imowudi yokudubula, kunye nokuninzi. Olu luhlu lulandelayo luya kukukhomba kwicala elifanelekileyo:
Ubude bendawo: Xa ufota ubume bendawo obuhle kunye nelanga eliphumayo, khetha ubude obukwi-engile ebanzi phakathi kwe-24mm kunye ne-35mm. Ilanga liza kuba lincinci emfanekisweni, kodwa uya kubamba ubuhle bembonakalo yomhlaba kunye nawaphi na amafu asendaweni. Ukongeza, ikhamera ayizukubuyekeza uluhlu olubanzi lobubanzi kuba ilanga yindawo encinci yokukhanya.
ENKULU: Khetha iseto se-ISO esisezantsi kunesibane sokukhanya esikhoyo. Oku kuqinisekisa umfanekiso ongenangxolo. Ukuba kufuneka wandise useto lwe-ISO, ungagqithi kwi-ISO 400, ukuba inzwa yekhamera yakho ayisosakhelo sipheleleyo okanye i-ISO 800, ukuba ikhamera yakho inesakhelo sesakhelo esipheleleyo.
Imowudi yokudubula: Sebenzisa imo ephambili yokuvula xa ufota ukuphuma kwelanga enomhlaba omhle. Oku kukunika ulawulo olupheleleyo kubunzulu bentsimi.
Umngxuma: Khetha eyona ndawo incinci yokuvula enika isantya se-shutter se-1/50 yomzuzwana. Ukuba ilensi yakho inozinzo kumfanekiso, ungafumana ngesantya se-shutter se-1/30 yomzuzwana, okanye mhlawumbi u-1/15 wesibini ukuba unesandla esomeleleyo.
Kuya kufuneka usebenzise ukuvula nge f-stop value ye f / 11 okanye ngaphezulu. Xa ucofa ixabiso eliphezulu lokumisa u-f, ufumana indawo encinci yokuvula kunye nobunzulu bentsimi. Ukuba udubula kweyona ndawo inkulu ekucetyiswa ukuvula kuyo kwaye isantya se-shutter sakho sisezantsi kakhulu, enye into kukwandisa useto lwe-ISO.
Sukonyusa useto lwe-ISO ngaphaya kwe-400, okanye i-800 ukuba unekhamera ene-sensor epheleleyo-yesakhelo, ngakumbi ukuba imeko inendawo ezininzi zesithunzi.
Unyawo: I-tripod ayikhethi kodwa iqinisekisa ukuba ufumana umfanekiso obukhali. Uyakufuna i-tripod ukuba ufota ubuhle bendawo ngaphambi kokuphuma kwelanga.
Imbuyekezo yokuveza: Xa ufota ukuphuma kwelanga, ikhamera yakho iya kucinga ukuba imeko kufuneka icace ngakumbi kwaye iyakukwenza ubonakale. Ilanga linokukhanya, kodwa ufumana iindawo ezimnyama kwindawo yakho.
Ukugcina inyathelo elinye phambi kwekhamera yakho, jonga iifoto zakho njengoko ifoto yakho iqhubeka. Ukuba umfanekiso kumlondolozi wakho weLCD ubonakala ukhanyayo kunombono ophambi kwakho, sebenzisa imbuyekezo yokubhengeza ukunciphisa ukubonwa.
Ukuguqula isihluzi sokuxinana okungagungqiyo: Esi sihluzo simnyama kakhulu embindini kwaye ngokuthe ngcembe siyacaca phezulu. Esi sihluzo silinganisela ukukhanya okuqaqambileyo kwelanga kunye nezithunzi, ukuzisa uluhlu olunamandla kwinto enokulawulwa yikhamera yakho yedijithali.
i-viagra iphuma nini kwilungelo elilodwa lomenzi
Ixabiso le-symbicort 160 4.5
Elona xesha lilungileyo lokuthatha i-pantoprazole 40 mg
Iziphumo ezibi zebuspirone umsindo
injani ipilisi yefentanyl
I-duloxetine yinto elawulwayo